टैटू अर्थ - टैटू कला विचार
अर्थको साथ ट्याटोहरू
sonitattoo जुन 23, 2016
जापानी टैटू धेरै अर्थ र उद्देश्य संग प्रसिद्ध छन्। जापानी टैटू फरक आकार र आकारमा आउँछ। ट्याट को प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तुहरु को कोइ माछा र ड्रैगन जस्तै प्रतीकात्मक कथाहरु लाई पनि भनिन्छ। ड्रैगन धन, फोकस र बल संग जोडिएको छ। जब तपाईं टेटोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन आकर्षक र प्यारातया विशेष व्यक्तिहरू छन्, तपाइँ ट्याटुको अर्थ सोध्न बाध्य छन्। त्यहाँ केहि टैटूहरू छन् जुन तपाईं रोक्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरूको अर्थको लागि माग गर्न चाहानुहुन्छ। यस्तो टैटू मध्ये एक ड्रैगन टटू जुन विविधता र शैलीहरुमा आउँछ। टटू स्टाइलिलीले तयार पारेको तरिकाले तपाईलाई यस तथ्यको सराहना गर्नेछ कि यो विदेशी र सुन्दर छ।
कोई माछा अर्थका साथ आकार र रङमा फरक आकारको हुन सक्छ। केही मानिसहरूले यो पहने भन्छन् कि यो संघर्षको कारण हो जुन सामना गर्दैछ कि उनी स्याहीको प्रयोग गर्दै छन्, जबकि कसैलाई यो सबै आश्वस्त गर्न को लागी सबै को प्रयोग गर्न को लागी। यसको मतलब मित्रता, भावुक प्रेम, स्वतन्त्रता, शक्ति, शुभकामना, लामो जीवन, समृद्धि, मस्तिष्क र उन्नति हुन सक्छ। जापानीबाट थप ट्याटटोहरू छन् जुन गहिरो र स्थायी अर्थहरू छन् जुन तपाईं अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ।
पुरुष र महिलाका लागि भर्खरैका जापानी ट्याटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
होंठ प्रायः महिलाहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ को लागी अंतरंग र अपमानजनक क्रियाकलापको बारेमा कुरा गर्न। यो विभिन्न रंग, जुनून वा ढाँचामा चित्रित हुन सक्छ। रातो हड्डी चुम्बन र यौन अपीलको बारेमा कुराकानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जब यो इलाकामा पेट, हिप्स, गर्दन, आदि जस्ता अंतरजातीय छ। यो शरीरको धेरै क्षेत्रमा चित्रित हुन सक्छ जसले चुम्बनलाई असर गर्नेछ। जिब्रोको साथ आउँने रातो ओठहरू आविष्कारवादसँग सम्बन्धित हुन सकिन्छ। रातो रङ्गहरू कामुक र कामुक विषयहरूको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै ट्याबू विषयवस्तुहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईं यसको साथ सम्बद्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
जब मुख खोलिएको छ, यो counterculture को बारे मा कुरा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिङ प्रतिनिधित्व गर्न ओठहरू प्रयोग गरिन्छ। मान्छेहरू रोमान्टिक प्रतीकमा चित्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो रोमान्स प्रदर्शन गर्न वा अर्को स्तरमा यसलाई कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, होंठ तपाईंको कथा बताउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम होंठ टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
Semicolon टैटू अर्थ
अर्धकोट टैटू सानो हुन सक्छ तर अर्थ भनेको ठूलो हो। टैटू धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ र यसलाई प्रयोग लत, अवसाद, आत्म चोट, आत्महत्या र प्रयोगको साथ जीवनको लागी पनि प्रयोग गरिन्छ। जीवन को अर्थ को बारे मा अर्धकोल वार्ता, मान्छे को अन्त को आश्वस्त गर्न को लागि। आज, सेमीकोमोन टटू प्रतीक भएको छ जुन उनीहरूको लागि जिन्दगीको लागि केहि छ भनेर सम्झनका लागी प्रयोगमा रहन संघर्ष गर्नेहरू छन्। यो टैटू को विभिन्न आकारहरु छन् र तपाईं एक निर्णय गर्न को लागी एक तरिका हो कि तपाईं आफ्नो अर्कोकोन जस्तै हेर्न चाहानुहुन्छ। दिनको अन्त्यमा, सेमिनारले ठूलो कुरा र बढी सार्थक प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तपाईं प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ।
ती छनौट गर्नेहरूले यो टैटू स्याङ्किङ्ग गर्न सक्छन् भनेर बताउन सक्ने छन्। टैटू क्लासिक हो र केवल मानिसहरुलाई प्रेरणा दिन सक्छ कि तपाईं आफ्नो सपनाहरु पछ्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईं वास्तवमा प्रेरणा पाउन सक्नुहुनेछ जब तपाईलाई तपाइँको शरीरमा यी टैटूहरू स्याक्नु पर्छ। यसले व्यक्तिको सार्वभौमिकताको बारे लिन्छ जुन यो जाँच गर्दैछ। यसले आत्म नियन्त्रण लिन सक्छ र टैटू भएको व्यक्तिको खुलापन बारे पनि कुरा गर्दछ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् नवीनतम सेमीकोकोट टैटू डिजाइन विचार पुरुष र महिलाहरूको लागि।
यी सबै र अधिक ट्याटोहरू धेरै चीजहरूको प्रतिनिधित्वमा प्रयोग हुन सक्छ तापनि तिनीहरू शरीरको कुनै पनि भागमा सानो भए तापनि।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम सानो टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
एन्जिल टैटू अजीब छैन किनभने शानदार अर्थहरू जुन यो आउँछ। तपाईंले बिस्तृत कोण देख्नु भएको छ कि यसको अर्थ छ। कुनै पनि कुरा कसरी स्वर्गदूत तिमीहरूमा आकर्षित भएन, यसले अझै पनि तपाईंलाई एक विशेष अर्थ दिन्छ। स्वर्गदूत टैटू नकारात्मक कुराहरूको लागि खडा गर्दैन। तिनीहरू चुनौतीहरू भन्दा माथि उभिरहेका छन् वा जीवनमा संकट अघि बढ्छन्। यी केही अर्थहरू हुन् जुन स्वर्गदूत टटूसँग आउँछ।
स्वर्गदूतको अर्थ पनि पहननेवालाले यसको प्रयोग गरिरहेको बेला परिवर्तन गर्न सक्छ। शान्तता र स्थिरताले महिलाहरूलाई स्वर्गदूतले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् र पुरुषहरूले उनीहरूको इच्छामा स्वर्गदूतलाई अनुकूलन गर्न सक्छन्। पखेटाहरूसँग स्वर्गदूतहरू केही फरक पर्छन्। स्वर्गदूतले कुनै विशेष चिन्ह बनाउनको लागि यसको विशेष अर्थ बनाउन सकिन्छ। जब तपाईं आफ्नो स्वर्गदूत टैटूको लागि जानुहुन्छ, यो आवश्यक छ कि तपाईंको स्वर्गदूतलाई तपाईले के चाहनु भएकोमा अनुवाद गर्न सही विचार छ।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम परी परीटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
लंगर टटूले प्रतीक शक्ति र स्थिरतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। के तपाईंले पहिले एंकर टट्ट गर्नुभयो? यो टैटू धेरै वर्ष पहिले सिमेरियनहरूले सुरु गरेको थियो। टैटू संसारको सबैभन्दा पुरानो टैटू हो र यो प्रारम्भिक मसीहीहरूले पनि प्रयोग गरेको थियो। यो उनीहरूको विश्वासको कारणले गर्दा सताइएको थियो। यसमा एक समुद्री सेवा एजेन्सीमा नौसेना, शक्ति, सुरक्षा र सुरक्षामा समुद्री सेवा समावेश छ,
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम एंकर टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तीर टटटो अर्थ
तीर मूल अमेरिका को प्रतीकको रूपमा चिनिन्छ र कारक को बारे मा कुरा गर्ने कारकहरु मध्ये एक बन्यो। जब तीर क्रस हुन्छ, यसले मित्रताको बारेमा कुरा गर्दछ र जब बन्डलमा यो बलको रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। जब तीर एक हीरे मार्फत जान्छ, यो एकान्त तीर सुरक्षा र रक्षा को रूपमा चिनिन्छ जब यो साहसी छ।
जब यो हिरा चिन्हको माध्यमबाट खिचेको छ, यो साहसी प्रतिनिधित्व गर्न अगाडि बढ्न सक्दछ। "तिनीहरू पनि भन्छन्, एक एकल तीरले हानिबाट रक्षा र सुरक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो आन्दोलन वा दिशाको प्रतीकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तीरहरू शांत हुन सक्छन् र 'ब्वाइज' विवरण अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। रङ, बनावट र ड्रेस गर्ने तरिका भनेको के हो जुन मानव शरीर को भाग मा सबै भन्दा राम्रो को तीर टैटू बनािन्छ। तीर टटूको साथ, पुरुष वा महिलाले ठाडो हेर्नको लागि सुन्दर डिजाइन लिन सक्दछ। पाँच तीरहरूको बन्डल बलियो प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर एक तीर सजिलै तोड्न सकिन्छ। तीरको एक बन्डल तोक्न कठिन छ। तीरहरू तिनीहरूका डरलाग्दो प्रबन्ध र भीडमा उभिएका तरिकाहरू खोजिरहेकाहरूलाई बलियो स्रोतको रूपमा चिनिन्छन्।
पुरुष र महिलाका लागि नवीनतम तीर टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तितली टटटो अर्थ
आध्यात्मिकता र प्रेमबारे तितली वार्ता यसले मनोविज्ञान र प्रेम, इच्छा र स्नेह पनि चित्रण गर्न सक्छ। तितली धेरै सुन्दर र रंगीन हो जुन कारण यही कारणले महिलाहरु लाई उनीहरुको शरीरमा स्याहार गर्न चाहान्छ। सुन्दरता र गौरवले यो स्याउको छ जब यो स्याही छ अद्भुत छ। यो तयारी गर्ने काम हो कि टैटू राख्नु पर्ने छ।
तितली टटू प्यारा र अद्भुत छ। तितलीले राम्रो परिवर्तन गर्न सक्नु अघि केहि परिवर्तन ल्याउन जान्दछ। नतिजाको रूपमा, धेरै अर्थहरू तितलीहरू जस्तै पुनरुत्थान र पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छन्। ईसाईहरूले मृतकहरू र येशूलाई पुनरुत्थानबाट येशूलाई पुनरुत्थानको रूपमा तितलीको रूपमा लिन्छन्।
तितली टैटू पनि अर्थ, प्रेम, पुनरुत्थान र पुनरुत्थान, आध्यात्मिकता र आत्मा, परिवर्तन, आध्यात्मिकता र आत्मा, अनुग्रह र स्त्रीत्व। त्यहाँ केहि टैटूहरू छन् जुन तपाईं रोक्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरूको अर्थको लागि माग गर्न चाहानुहुन्छ। यस्तो टैटू मध्ये एक तितली टटू हो जुन विविधता र शैलीहरुमा आउँछ। साथै, केल्टिक तितली टैटू आध्यात्मिकता र पगनवादको प्रतीक हो। त्यहाँ स्तनपानको तितली टटू छ जसको बारेमा कुराकानी र आशा र पुनरुत्थानले उनीहरूलाई बाँचेकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम तितली टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
चेरी खिलौना टैटूहरूले जीवनको कमजोरी प्रतिनिधित्व गर्न र सुन्दरताको बारेमा कुरा गर्न सक्छन्। महिलाहरू यसलाई प्रेम गर्छन् किनभने तिनीहरू तिनीहरूको बारेमा धेरै कुरा गर्छन्। यो महिलाहरूलाई प्रेरणा हो जसले संसारका कथाहरू बताउने तरिकाहरू खोजिरहेका छन्। जब तपाईं चेरी खिलौना टटू चयन गर्नुहुन्छ, तपाईलाई हराएको प्रेमको बारेमा हराएको प्रेमको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो विभिन्न शैलियों र आकृतिहरु र अधिकांशतया संस्कृतिको अनुसार आउँछ जसबाट यो ड्राइएको थियो। टैटूलाई माया गर्ने धेरै मानिसहरू यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन् धेरै चीजहरू व्यक्त गर्दछ।
आज, पनि पुरुषहरूले यो चेरी खिलौना टटूलाई स्याङ्किङ्ग गर्दैछन् भनी देखाउनका लागि उनीहरूले कसरी उनीहरूको साझेदारलाई माया गर्न सक्छन् कति राम्रो हुन सक्छन्। र उनीहरूको साझेदारहरूसँग मेल खाने जस्ता लक्क, प्रेम, अपमान, शुद्धता, सुन्दरता, सौन्दर्य, भव्यता, शक्ति, नोभल, नविकरण, संक्रमण र समृद्धिको बारेमा कुराकानी गर्दछ। फूल वसन्त समय मा देखाइएको नवीकरणको साथ पनि पर्याय छ। वसन्तको हानिकारकको रूपमा, चेरी फूलहरू राम्रो खेतीका प्रतीक हुन्, फसलहरूको सुरक्षा र कठोर विद्राहरू पछि जीवनको शानदार फिर्ती। प्रतीक अर्को चीज हो जुन मान्छे को मनपर्छ विशेष गरी महिलाहरु लाई टैटू बनाउँछ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम चेरी ब्लसोस टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मानिसहरू कम्पास ट्याटमा जाने कारणहरू मध्ये एक कारणले यो प्रतिनिधित्व गर्दछ। कम्पास ट्याटको फरक अर्थ छ तर तर पानीमा भएका मानिसहरूसँग, यो साँच्चै मूल्यवान छ। यसको अर्थ राम्रो भाग्य, सुरक्षा र समर्थनको टोकन हो। टटू विभिन्न प्रकारका र शैलीमा आउँछ। त्यहाँ यी ट्याटोहरूका प्रकारहरू छन् जुन लुगा लगाएर धेरै व्याख्याहरू छन्। एक सपना पछि तपाईं ट्याटु को अर्थ को एक हो। तपाइँलाई जीवनमा तपाईंको दृष्य अरूलाई जान्न टाढा जानु पर्ने छैन। यो ट्याटू संग, तपाइँ सजिलो बनाउन आफ्नो कथा संसारलाई बताउन सजिलो छ।
टैटूको शरीरको कुनै पनि भागमा रेखाचित्रले तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईंले पहिलो उदाहरणमा टैटूलाई किन छान्नुभएको छ। यो राम्रो भाग्य को टोकन पनि मार्गदर्शन र निर्देशन को लागि छ। यो कम्पासको धेरै चित्रहरू जहाजमा चित्रित देख्न सकिन्छ किनकी कारण हो। टैटू को लोकप्रियता केहि चीज हो जुन तपाइँ यसलाई देख्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी दिनहरू, अब यो पुरुषहरू जुन यसको प्रयोग गर्दै छन् तर त्यस्ता महिलाहरू पनि जोन हेर्न चाहन्छन्।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम कम्पास टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यो ट्याटको अर्थ के हो? अजगर टैटू को लागि धेरै मान्छे को फरक अर्थ छ। तथापि, इज्जत ट्याट डिजाइनले राम्रो समाचार, किस्मत, सुरक्षा र समृद्धिको अर्थ हो। त्यहाँ जादुई, बुद्धि, योद्धा, लोभ, शक्ति, प्रजनन, ड्यूटी, बुद्धि, बल, फोकस, आध्यात्मिकता, आनन्द र धेरै अन्य अर्थ जस्ता अन्य अर्थहरू छन्।
त्यहाँ केहि टैटूहरू छन् जुन तपाईं रोक्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरूको अर्थको लागि माग गर्न चाहानुहुन्छ। यस्तो टैटू मध्ये एक ड्रैगन टटू जुन विविधता र शैलियों मा आउँछ .यो ड्रैगन अर्थ विभिन्न आकृतिहरुमा आउछ जब शरीर मा हस्ताक्षर गरेर रहेको छ। केही मानिसहरू पनि आफ्नो ड्रैगन टैटूमा रङहरू थप्नका लागि यसलाई असाधारण र उनीहरूको स्वादमा अनुकूलित बनाउन। यो टैटू शरीर को कुनै पनि भाग मा राखन सकिन्छ र यो अझै पनि कहानी को बताना हुनेछ कि यो मतलब छ। टैटूको महत्व र अर्थ भनेको के हो जुन धेरै व्यक्तिहरूलाई यसले राम्रो टैटूलाई प्रेम गर्दछ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम ड्रैगन टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
हात्ती टटटो अर्थ
हात्ती टटूको अर्थ फरक फरक फरक फरक छ। हात्तीले शान्ति, शक्ति र शक्तिको अर्थ बुझ्न सक्छ। यो उनका लागि प्रतीक हो जुन संचार, ज्ञान, शुभकामना र सफलता खोज्दै छन्। केहि मान्छे यो यसलाई प्रजनन को लागी मानिन्छ जब अरु यसलाई यो भक्ति, विचार, धैर्य र शुद्धता ले।
हाइफिकहरू पनि बादल र समृद्धि, महानता, आनन्द, स्मृति, दृढता र अदृश्यताको साथमा परेका छन्। हात्ती ट्याटोहरू विभिन्न आकृति र साइजमा आउँछन्। यद्यपि, यो तयारी गर्ने काम हो कि टैटू कहाँ राखिएको छ। यस टटूलाई प्रेम गर्ने सबैले अर्थलाई प्राथमिकता दिए र केवल उनीहरूलाई बताउन सक्छन् कि तिनीहरूले टाँस्ने ठाउँमा ट्याटको प्रयोग गर्दै छन्। हात्तीले समृद्धि, मेमोरी, प्रतिनिधित्व गर्दछ? खुशी, ?? अध्यापन, ?? निर्धारण, अहंकार र दया।
शक्ति, शक्ति, सफलता, पारिवारिक, सामुदायिक, मातृ, राम्रो चक्कर, बुद्धि, संचार र शान्ति हफ्ट टटू को प्रतिनिधित्व को केहि हुन्। हङकङका केही उत्तम प्राणीहरू जुन तपाईले आफ्नो शरीरमा स्याहार लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यो निस्सन्देह महसुस गर्नुहुने छ कि तपाइँ टाटा बन्द गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं भित्र हुनुहुन्छ। स्थान शरीरको कुनै पनि भागमा गर्न सकिन्छ। साथै, ह्याट्टै शरीरमा सारिएको हुन सक्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम हङकङ टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
Koi माछा अर्थ
कोई माछा अर्थका साथ आकार र रङमा फरक आकारको हुन सक्छ। केही मानिसहरूले यो पहने भन्छन् कि यो संघर्षको कारण हो जुन सामना गर्दैछ कि उनी स्याहीको प्रयोग गर्दै छन्, जबकि कसैलाई यो सबै आश्वस्त गर्न को लागी सबै को प्रयोग गर्न को लागी। यसको मतलब मित्रता, भावुक प्रेम, स्वतन्त्रता, शक्ति, शुभकामना, लामो जीवन, समृद्धि, मस्तिष्क र उन्नति हुन सक्छ।
टटू कि रंग आउँछ धेरै चीजहरू पनि निर्धारण गर्दछ। यसले राम्रो भाग्य, प्रेम र भाग्य को प्रतीक गर्दछ। तपाईं टटूको रंग र आकार तय गर्न सक्नुहुन्छ। अनुकूलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामीले शरीरका विभिन्न भागहरूमा कोई माछाको विभिन्न आकारहरू देखेका कारण हो। टैटूको रचनात्मकता मात्र अद्भुत छ। लोटस फूलहरू प्रायः टैटूहरूमा चित्रित हुन्छन्। नीलो कमलले भौतिक मा आध्यात्मिक नियन्त्रण को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले ज्ञान, बुद्धि र ज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। बैंगनील कमलले धर्ममा रहस्यमय दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ। गुलाबी कमल बुद्ध को बारे मा वार्ता गर्छन जबकि लाल कमल को हृदय, दया र प्रेम सहित जुनून को बारे मा वार्ता गर्छन।
Koi माछा पनि सफलता र एक आधुनिक तरिका को समस्या को बीच मा ध्यान केंद्रित को एक आधुनिक तरीका र चुनौती को समर्थन को आवश्यकताहरु को लागि चुनौति को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम कोइ माछा टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
शेर टटू सधैँ आफ्नो नजरमा व्यर्थ र गर्व, साहस, रोयल्टी र बलबारे कुरा गर्छ। संस्कृतहरुको अनुसार विभिन्न अर्थहरू छन्। शेरले पनि शुद्धता, शक्ति, बहाली, साहस, वफादारी, अध्यापन, सुरक्षा, ईमानदारी, शक्ति, सत्यता र प्राधिकरणको अर्थ पनि बुझ्न सक्छ। एक शेर टाट को अर्थ धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकी धेरै मानिसहरू सधैं तिनीहरूका स्याङ्जाको महत्व जान्न चाहन्छन्। कला सुन्दर छ र शरीरको कुनैपनि कलालाई पनि औंलाजस्तै साना भागहरू समात्न सक्छ।
सिंहहरूको बारेमा कुरा गर्ने दृष्टिकोणहरू के हुन् उनीहरूलाई उत्तम ट्याटुको स्याउको एक बनाएर। पछाडी दुई शेरहरू पछि फर्केर आउछन् हामीलाई सूर्योदय र सूर्यास्त वा पूर्वी पूर्वी पश्चिमको बारेमा पनि आउँदैछ। सिंहले डोऱ्याइको बारेमा कुरा गर्न सक्छ र संसारभरका केही पवित्र वा सम्मानित ठाउँहरूमा देख्न सकिन्छ।
पुरुष र महिलाका लागि नवीनतम शेर ट्याटो डिजाइन डिजाइन विचारको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
लोटस टैटू अर्थ
लोटस टैटू जटिल हुन सक्छ र उनीहरूको अर्थपूर्ण टैटू डिजाइनहरूले अद्भुत रूपमा अद्भुत बनाएका छन्। ट्याटूको रंगले लोस टैटूलाई विभिन्न अर्थ दिन्छ। मानसिक र आध्यात्मिकताबारे व्हाइट कमल वार्ता। यसले पूर्णता र शुद्धताको बारेमा पनि कुरा गर्छ।
नीलो कमलले भौतिक मा आध्यात्मिक नियन्त्रण को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले ज्ञान, बुद्धि र ज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। बैंगनील कमलले धर्ममा रहस्यमय दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ। गुलाबी कमल बुद्ध को बारे मा वार्ता गर्छन जबकि लाल कमल को हृदय, दया र प्रेम सहित जुनून को बारे मा वार्ता गर्छन।
त्यहाँ ट्यापको विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन तपाईले हेर्नु भएको तरिका परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, विभिन्न आकार र आकारमा पंखहरू। त्यहाँ शरीरको कुनै भाग छैन कि यो फिट छैन। प्वाँट टटको अर्थ के हो? धेरै मानिसहरू यसको लागि फरक अर्थ छन्। लोटस टैटू प्रतीक हुन् जुन कारण मान्छे सजिलै संग उनको लागि जान्छन् विशेषकर धार्मिक जो यो प्यारा टैटू को अर्थ को धेरै धेरै हेर्नुहोस। यो कोई माछा संग प्यार को लागि अर्को अद्भुत अर्थ बनाउन को लागि तैयार हुन सक्छ, सफलता, राम्रो भाग्य, बाधाओं को सामना गर्ने क्षमता र पनि खतराहरु।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम लोटस टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
प्वाइटर टैटूले स्वतन्त्रताको अवधारणाको अर्थ राख्दछ किनभने यो पक्षीसँग सम्बन्धित छ। पक्षीहरू निःशुल्क जनावरको रूपमा मानिन्छ र यसैले तिनीहरू विश्वको एक भागबाट अर्कोमा उड्न सक्छन्। एक वा एकाधिक पंखहरूले स्वतन्त्रता खोज्ने बारे कुरा गर्न सक्छन्। साथै, पंखले आंदोलन, विचारहरू, अन्तरक्रिया गर्ने क्षमता र बुद्धिमानी तत्वको बारेमा समान रूपमा बोल्छ। प्वाइटरहरू बितेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, मरेकासँग सम्बन्ध।
Feather टैटू केहि उत्तम टैटूहरू छन् जुन तपाईं वरपर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुर्लभ र विशेष छ। यो सबै होइन कि तपाईंले यी टैटूहरू हेर्नु हुन्छ। जब तपाईं आफ्नो मुक्ति खोज्न को लागी टटू डिजाइन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो टैटू मात्र सुन्दर र महत्त्वको कारण जान्छ। तिनीहरू पनि आकाशबाट उपहारहरू देखाउँछन्। पंखहरूले पनि स्वतन्त्रता, सत्य, लक्षण, गति, उच्चता, उडान, उच्च मनोभाव, सपनाहरू, शुद्धता, साहस, वचन, बहाली, आशा, अर्को पक्षसँग कुराकानी, आत्माको यात्रा, जादुई, जादू, स्तर र अनगिन्तीपनको अर्थ पनि छन्। ट्याटुको सुन्दर रूपमा डिजाइन गरिएको हो कि तपाईलाई चाहिने पहिचानको आवश्यकता छ। त्यहाँ ट्यापको विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन तपाईले हेर्नु भएको तरिका परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम पंख टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
Owl Tattoo अर्थ
उल्लू टैटू ती व्यक्तिहरूका लागि हो जुन अन्धकार वा पनि छाया वाहिकाहरूको रहस्यलाई प्रेम गर्दछ। उल्लेखित टटू रात भेडाइनलहरू र ती चीजहरूको दायराको प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ।
उल्टो भयभीत क्षणमा आशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। रातमा उल्टोको शक्तिशाली अवधारणाको कारण यसको अचम्मको दृश्यले मानिसहरुलाई अन्त गर्दछ। यसले गहिराईको मतलब हुन सक्छ कि सुरंगको अन्त्यमा प्रकाश छ। टटू को अर्थ शक्ति, जादू, सपना, स्पष्टता, निर्देशन, अन्तर्वार्ता, ज्ञान, जागरूकता र सुरक्षा हुन सक्छ।
यो पनि जादू कनेक्शन, बल र राम्रो सपनाहरु को मतलब छ। उल्लू धेरै तरिकाहरु मा आकर्षित गर्न सकिन्छ र तिनीहरूले प्रेम गर्नेछन् कि महान अर्थ संग समाप्त। उल्लू टैटू कसैको सम्झना हुन सक्छ जसले मर्छ र हामी सबैले यस जीवनलाई पूर्णतया बाँच्न सक्दछ।
ओल्लहरु को डिजाइन पनि उनको अर्थ छ कि लोकप्रिय चीनी उल्लू टैटू जसलाई अक्सर मेक्सिकन उल्लू टैटू या कैंडी उल्लू टैटू भनिन्छ। उदाहरणको लागि मेक्सिकोहरूले यो ठाउँको भूमिकाको कारण मृत टटूको दिनलाई प्रेम गर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि तरिकाले शरीरमा यो फरक बनाउन सक्छ कि विभिन्न तरिकाहरू छन्। दिनको अन्तमा, यो पहनने वाला हो, जो टैटू का अर्थ के बारे मा सजिलै संग कुरा गर्न सक्छन्।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम ओलट टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
गुलाब टैटू अर्थ
गुलाबले प्रेमलाई चित्रण गर्छ। जो प्यार मा छन् गुलाब टैटू संग सजिलै संग पहिचान गर्न सक्छन्। जब गुलाब काँध संग छैन, यसको मतलब यो हो कि जब मायालु र त्यसपछि, जब काँडाहरू हो भने कुनै बलिदान छैन, यसको अर्थ बलिदान हो त्यहाँ छ। अनन्त सुन्दरता भनेको के हो जुन गुलाबले पनि केहि मानिसहरूलाई पनि बुझ्न सक्छ। केही नाविकहरूले यो ट्याटू छान्नुको कारण यसको विशेष उद्देश्यहरू। यो femininity लाई पनि जोडिएको छ कि ज्यादातर विशेष विशेष महिलाहरु लाई संदर्भित गर्दछ जो यात्राहरु को पछि पछि छोडिन्छ। यहां सम्म कि केहि देवीहरुलाई यो टैटू संग पहिचान गरिएको छ। गुलाब पनि सन्तुलनको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सकियो दिनहरू जब गुलाबहरू महिलाहरूका लागि मात्र हुन्।
आज, यहाँ पनि पुरुषहरूले यो टैटूलाई स्याङ्किङ्ग गर्दैछन् कि उनीहरूले कसरी उनीहरूको साझेदारलाई माया गर्ने कुरा कत्ति राम्रो हुन सक्छन्। यसको मतलब प्रेम, पुनरुत्थान र पुनरुत्थान, आध्यात्मिकता र आत्मा, परिवर्तन, आध्यात्मिकता र आत्मा, अनुग्रह र स्त्रीत्व। सुन्दरता र गौरवले यो स्याउको छ जब यो स्याही छ अद्भुत छ। यो तयारी गर्ने काम हो कि टैटू राख्नु पर्ने छ। । कला सुन्दर छ र शरीरको कुनैपनि कलालाई पनि औंलाजस्तै साना भागहरू समात्न सक्छ। टटको स्थानीय महत्व जसको व्यक्तिले यसको बारेमा सोच्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम गुलाब टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जनजातीय टैटू अर्थ
जनजाति टटूहरू बाधाहरू हटाउन बल वा साहसी प्रतिनिधित्व गर्छन्। आदिवासीहरूको अर्थ संस्कृति वा ठाउँ वा स्थानीयबाट आएको छ। यो पुरातन दिनमा शुरु भयो जब केहि व्यक्तिहरूले उनीहरूको ट्याटोटोमार्फत पहिचान पाउँछन्। आध्यात्मिक वा धार्मिक विश्वासबारे छलफल गर्न जनजातीय टैटू प्रयोग गरिन्छ। यो छलकपटको रूपमा प्रयोग वा सुरक्षाको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यो पनि कहानियों को भन्न को लागी कि कुनै पनि जनजाति को छोडने को लागी नहीं गरेर सकते कि आदिवासी टैटू देखि आयो। तपाइँलाई जीवनमा तपाईंको दृष्य अरूलाई जान्न टाढा जानु पर्ने छैन। यो ट्याटू संग, तपाइँ सजिलो बनाउन आफ्नो कथा संसारलाई बताउन सजिलो छ।
आदिवासी टटू को अर्थहरु को एक धेरै छ र पूर्णता को संकेत गर्न सक्छन्। पूर्णता र सन्तुलन र अनन्तताको बारेमा टट वार्तामा सर्कल, जब तपाई दूरीबाट सबै बिन्दुहरूलाई दूरीबाट हेर्नुहुन्छ। धेरै धर्मले यसको विश्वासीलाई धेरै कुरा भन्न भन्न यसको प्रयोग गर्दैछ। टैटूले राजनीतिकता, सम्मान, दया, वफादारी, इमानदारी र ईमानदारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। टैटू पनि साहसी, शक्ति र संसाधनको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो चीजहरूमा चित्रण गर्न सकिन्छ जुन अक्टोपस, कोई माछा र ओक्टोपस जस्तै सुरक्षा, सहयोग र साहस लागि खडा हुन्छ।
पुरुष र महिलाका लागि हालको आदिवासी टेटटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
वुल्फ टैटू अर्थ
ब्वाँसो टैटू स्वतन्त्रता खोजकर्ताहरूको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। टैटूले पनि आत्म प्रेम र आदर, बल र सत्यनिष्ठालाई पनि अर्थ दिन्छ। भेडाले पनि जंगली, परिवार, शक्ति, प्रवृत्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, अस्तित्व र धेरै धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ। । साइबेरियन किनारामा, भेडालाई बच्चाहरूको निर्दोषको रक्षा गर्न भनिन्छ - र विशेष गरी स्वस्थ प्रसव को बीमा गर्न को लागी बोलाइएको छ। पुरानो यूरेशियामा, भेडाहरू रहस्यको एक संरक्षक थियो। जाहिर छ भने तपाईंले आफ्नो गुप्त भेडालाई बोलाउनुभयो भने, तपाईं बोझबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो जब भेडाले सधैंको लागि ज्ञानको रक्षा गर्दछ।
ब्वाँसो टैटू के लिए जाना लोग जोश द्वारा शासन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। प्रेमीहरूले यो टैटू स्याउ कसरी देखाउन सक्छन् भनेर देखाउँछन्। ब्वाँसो माना जाता है कि उन लोगों के संरक्षक हैं जिनके पास मर गया है। यो प्रायः कब्रहरू वा कब्रहरूमा देखिएका कारण हो।
ब्वाँसो टैटू दुनिया के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है और वे बहुत सारे चीजें भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यी टैटटोहरूको भिन्नता भनेको के हो उनलाई असाधारण। तिनीहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्
ब्रिट शक्ति, शक्ति, प्रभुत्व, रियायत र अध्यापन, खतरा र विनाश, ऊर्जा, संरक्षण र अभिभावक, जुनून र यौन क्षमता। यो कारण धेरै मानिसहरू यसको प्रयोग गर्दै छन्।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम भेडा टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
हात्ती टटूFeather Tattooक्राउन टैटूहरूहात ट्याटोसपक्षी टैटूहरूहीरे टैटूछाती टैटूहरूटैटू विचारहरूपुरुषहरूको लागि टैटूचेरी खिलौना टैटूयुगल टैटूहरूओटोपस ट्याटूकम्पास टैटूप्यारा टैटूहरूआदिवासी टैटूहरूबिस्कुट टटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिदूत टैटूप्यार टैटूअनन्तता टटूज्यामितीय ट्याटुहरूगर्दन टैटूहरूसिंह टटटोहरूkoi fish tattooरिप टैटूहृदय टटटोईगल ट्याटोटखने टैटूकमल फूल टटूक्रस टैटूसूर्य टैटूहरूपैट टैटूसंगीत टैटूहरूतीर टटूबिल्ली ट्याटोचन्द्र टोटोटोआँखा टटूहेनना टैटूmehndi डिजाइनबहिनी टैटूहरूतितली टैटूहरूएंकर टैटूहरूफिर्ता ट्याटोहरूगुलाब टैटूहरूआस्तीन टैटूहरूहात टाटाटोससबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूwatercolor टटूफूल टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरू